‘पृथ्वी कोल्टो नभइदिएको भए विश्व इतिहास फरक हुने रहेछ’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
‘पृथ्वी कोल्टो नभइदिएको भए विश्व इतिहास फरक हुने रहेछ’
असार २६, २०७८ कृष्ण आचार्य
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टिमा हामी नेपाली अपूर्ण र एकांगी विकासको चित्रमा बढी मुग्ध छौं । भन्छन्, ‘विकास अर्थात् ढुंगा, माटो, गिट्टी, अलकत्रामा हामी अड्किएका छौं ।’ हाल यूएनडीपीको मुख्यालय न्युयोर्कमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार वाग्लेको विचारमा नेपाली समाजलाई खराब राजनीतिले न्याक्दा कला, संस्कृति र साहित्य ओझेल परेको छ ।
किताब संसारभित्र पसेर उनी गम्भीर ज्ञान–मीमांसा गरिरहेका हुन्छन् । उनलाई प्रभाव पारेका किताब, तिनका सन्दर्भ र अध्ययनका विविध आयामबारे वाग्लेसँग कृष्ण आचार्यले गरेको संवाद :
किताबको संगतमा कसरी पुग्नुभयो ?
एसएलसीसम्म अतिरिक्त किताब उति पढिनँ । केही किशोर साथीहरूमाझ अंग्रेजी उपन्यास प्रिय थिए । मेरोचाहिँ त्यतातिर लगाब थिएन, पाठ्यपुस्तकमै घोत्लिन्थें । जाँचमा धेरै नम्बर ल्याउने र छात्रवृत्ति पाएर विदेश पढ्न जानुपर्छ भन्ने एकसूत्रीय सोच थियो । सन् १९९३ मा बेलायत गएपछि पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरी ज्ञानतिर पस्न थालें । बेलायत यसै पनि ऐतिहासिक र सुसंस्कृत सहर ! ‘चार्ल्स डिकेन्सले उपन्यास लेखेको स्थान’, ‘विन्स्टन चर्चिल युद्धकालमा बसेको घर’ जस्ता दर्जनौं ऐतिहासिक रेकर्ड बेलायतका गल्ली–गल्लीमा देखिन्थे । बीबीसी विश्व सेवा थियो, त्यहाँ काम सुरु गरें, २० वर्षको थिएँ । सहजै संसद्भवन छिरेर बहस सुन्न सकिन्थ्यो, एक पटक त प्यालेस्टिनी ‘लेजेन्ड’ यासर अराफतसँगै जम्काभेट भयो । यसरी इतिहास र समसामयिक विषयमा चासो राख्ने एक अर्थशास्त्रको विद्यार्थीका नाताले मेरो लन्डन बसाइ अत्यन्तै रोमाञ्चक रह्यो । लन्डन स्कुल अफ इकनमिक्सको पुस्तकालय विश्वकै सबभन्दा ठूलो समाज विज्ञानको भण्डार हो । त्यहाँभित्र पसेपछि मेरो घण्टौं समय उसै बित्थ्यो ।
किताब कसरी छान्नुहुन्थ्यो ?
सुरुआतमा अर्थशास्त्रका किताब छानीछानी पढ्थें । बिस्तारै अर्थराजनीति र इतिहासका किताबतिर लागें । सँगै फिक्सन पनि पढ्न थालें । विश्वप्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार बुकरको चर्चा वर्षैभर चलिरहन्थ्यो । दक्षिण एसियाली भएका नाताले अंग्रेजीमा लेख्ने एसियन मूलका विक्रम सेठ, भीएस नयपल, सलमान रुस्दी, रोहिन्तन मिस्त्रीजस्ता लेखकका किताब चाख लिएर पढ्थें । पछि मूलधारका ब्रिटिस, अमेरिकन लेखकका किताब पढ्न थालियो । ब्रिटिस लेखक ईएन मकएवन मेरा प्रिय थिए । समग्रमा अर्थशास्त्र, अर्थराजनीति, इतिहास र फिक्सन पढ्ने मेरो लत त्यही बेला बसेको हो ।
कस्ता किताबले जीवनमा धेरै प्रभाव पारे ?
जीवनमा प्रभाव पारेको र मेरो सोचाइमै परिवर्तन ल्याएका किताब धेरै छन् । तर, आज दुई किताबको मात्रै चर्चा गर्छु । २२ वर्षअघि स्नातकोत्तर पढ्न म हार्भर्ड विश्वविद्यालय पुगेको थिएँ । त्यसबेला २ वटा किताबको विशेष चर्चा थियो । पहिलो थियो– ज्यारेड डायमन्डले लेखेको– ‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टिल’ । किताबमा युरोपेलीहरू कसरी अगाडि आए भन्ने विवरण छ । लगभग १० हजार वर्षअघिदेखि १५ औं शताब्दीसम्मको मानव इतिहास तथा सभ्यताको चित्रण छ किताबमा । १५ औं देखि करिब २० औं शताब्दीसम्मको अवधि समेटेर लेखिएको त्यसबेला चर्चामा रहेको दोस्रो किताब हो– ‘द वेल्थ एन्ड पभर्टी अफ नेसन्स’ ।
यो किताब डेभिड लान्डेसले लेखेका हुन्, जसमा औद्योगिक क्रान्तिअघिका केही शताब्दी र औद्योगिक क्रान्तिका चरित्रबारे चर्चा छ । यी दुई किताब पढेपछि ‘हामी कसरी यहाँसम्म आइपुग्यौं ?’ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन्छौं । मानव प्रगतिको विषयलाई बहुआयामिक विधाको कोणबाट चित्रण गरेका छन् दुवै किताबले । विकास अर्थशास्त्रीका रूपमा मेरो जीवनको पेसेवर अध्याय सुरु हुँदा यी किताबले ठूलो प्रभाव पारे । किताबले बौद्धिक मुद्दाहरूको उठान गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सोच्ने तरिका नै फरक पारिदियो ।
‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टिल’ को उद्देश्य के हो ? किताबले पृथ्वीको इतिहासबारे तपाईंको सोचाइमा के असर गर्‍यो ?
हामी सामान्यतया किन कुनै देश धनी भए वा पछि परे भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँको राजनीति राम्रो वा खत्तम, नेता नै झुर वा राम्रो भन्ने कोणबाट धेरै बहस गर्छौं । तर, राजनीति वा राजनीतिज्ञको गुणस्तर खराबीको ‘सिम्पटम’ हो, कारकतत्त्व प्रायः अलि गहिरै हुन्छ । अमेरिका किन उन्नत भयो भन्दा जर्ज वासिङ्टन, अब्राहम लिंकन, फ्य्राङ्कलिन रुजभेल्ट, केनेडीजस्ता मानिसको नाम लिँदै ‘सजिलै’ उत्तर दिइन्छ ।
हाम्रोमा पनि मुलुक किन बनेन भन्दा ‘नेता नै खत्तम’ भनेर बुद्धिजीवीदेखि चिया चौतारोसम्म टिप्पणी हुने गर्छ । सयौं वर्षको प्रमाण केलाएर अहिले विकास अर्थशास्त्रमा ‘संस्था’ वा ‘इन्स्टिट्युसन’ हरूको प्रधान भूमिकाबारे जरोमै पुग्ने गहिरो शोध जारी छ । इन्स्टिट्युसन केवल साइनबोर्ड झुन्ड्याएको भवन होइन, आर्थिक–राजनीतिक खेलका नियम र ती कत्तिको दोहनकारी छन् वा छैनन् भन्ने पनि हो । त्यस्तै हजारौं वर्षको प्रमाण केलाएर भूगोलको भूमिकाबारे पनि यथेष्ट चर्चा भएको छ । डायमन्डको किताबलाई पछिल्लो कोटीमा राख्न सकिन्छ । उनले युरोपेलीहरू अघि देखिनुमा बीउ, जीवाणु र बन्दुकको भूमिका छ भन्ने ‘थेसिस’ अघि ल्याए । कसरी त ?
पहिलो बीउ– मानव इतिहासमा कृषिको ६ पटक उदय, पुनरोदय, आविष्कार र पुनः आविष्कार भएको मानिन्छ– १२ हजार वर्ष पहिले पपुवा न्युगिनी, दोस्रो चीन, तेस्रो मेक्सिको, चौथो पेरु, पाँचौं अमेरिका, छैटौं युरोप र मध्यपूर्व जोड्ने लभान्ट क्षेत्रमा । लभान्टमा बीउ चाँडै उम्रन्थ्यो, हुर्कन्थ्यो र व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो थियो । फेरि प्रयोगका लागि बीउको आकार पनि ठूलो र उन्नत थियो । यी विषय औद्योगिक विकासभन्दा निकै अघिका हुन्, जतिबेला जनघनत्वको महत्त्व थियो । तीन जना मान्छे जम्मा भए तीन जोडी विचार आउँछन् । ६ जना मान्छे भयौं भने १५ जोडी विचार । जनघनत्व जति बढी भयो उति नै विचार, सहकार्य र सम्भावनाको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ । ठूलो जनसंख्या धान्न कृषि उत्पादन महत्त्वपूर्ण हुने भयो । बीउ, कृषि, जनसंख्या, विचार र प्रगतिको साइनो सुरुमा यसरी जोडियो ।
दोस्रो, जीवाणु– त्यहाँ जनावर पनि ठूल्ठूला र घरमै पाल्न उपयुक्त जातका भए । खेती गर्न मान्छेले ठेल्दाभन्दा जनावरले ठेल्दा बढी शक्ति प्राप्त भयो । साथै जनावरसँगै बस्न थालेपछि तिनले सार्ने रोगविरुद्ध मान्छेको प्रतिरोधात्मक क्षमता (इम्युनिटी) पनि बढ्यो । पछि उपनिवेशको खोजीमा युरोपेलीहरू उत्तर र दक्षिण अमेरिका पुग्दा त्यहाँका आदिवासीहरू सखाप भए किनभने युरोपेलीले ल्याएको रोगसँग भिड्ने इम्युनिटी त्यहाँ थिएन ।
तेस्रो, बन्दुक– जनघनत्वसँगै प्रविधिका रूपमा कम्पास, पाङ्ग्रा, टेक्सटायल, धातुसँग काम गर्ने सीप र जहाजको पनि प्रयोग हुन थाल्यो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ किताबले भनेको ‘गन’ अर्थात् बन्दुकले अन्य सबै आविष्कारको शक्तिलाई थप मजबुत बनायो, अर्थात् ‘म्यग्निफाई’ गरिदियो ।
समग्रमा यो किताबले १५ औं शताब्दीअघिका यी तथ्य अगाडि ल्याएको छ र जोडेको छ– पृथ्वीको ढल्केको आकारसँग । पृथ्वी सोझो भकुन्डोजस्तो नभएर अलिकति ढल्केको छ नि, त्यसको दूरगामी प्रभाव रह्यो । पूर्वदेखि पश्चिम र पश्चिमदेखी पूर्वतर्फ प्रविधि सजिलै सर्न सक्ने तर उत्तर–दक्षिणचाहिँ सर्न असजिलो भयो । जस्तो मेक्सिकोमा उब्जनी भएको मकैको बीउ त्यहीँ माथिको मिसिसिपी पुग्न हजारौं वर्ष लागेको छ ।
तर, भूगोल र जलवायुले पूर्व–पश्चिम यात्रा सहज हुँदा चीनमा भएको आविष्कार तुरुन्तै युरोप पुगिहाल्ने भयो । इटालीका मार्को पोलो १३ औं शताब्दीमै चीन पुगे । युरेसिया लामो, पूर्व–पश्चिम जोडिएको ठूलो महादेश भएकाले प्राचीन सभ्यता सबै त्यहीँ देखियो । पृथ्वी सोझो भइदिएको भए विश्वको इतिहास अहिलेभन्दा निकै फरक हुने रहेछ भन्ने कल्पनाले हाम्रो मस्तिष्क हल्लाउँदैन र ?
अनि अर्को किताब ‘द वेल्थ एन्ड पभर्टी अफ नेसन्स’ माथि पनि सारांशमा विमर्श गरौं न !
यो किताबमा औद्योगिक क्रान्तिभन्दा ३ सय वर्षअघिदेखिको पूर्वतयारीका कुरा छन् । ब्लक छपाइ, सेरामिक्स, गन–पाउडर, कम्पास, रेशम र धान खेती आदिको आविष्कार चीनमा भइसक्दा युरोपमा केही विकास भएको थिएन । तर, औद्योगिक क्रान्ति युरोपमा भयो, चीनमा भएन, किन ? सन् १४९२ तिर कोलम्बस अमेरिका पुगे । जबकि चिनियाँहरू जहाज लिएर १४१७ मै अफ्रिका पुगे भनिन्छ । तर, केही दशकपछि यस्ता बाह्य गतिविधिमा सम्राट्ले बन्देज लगाए । सन् १४५० तिर अन्तर्मुखी बनेको चीन एकै पटक देङ स्याओपिङ आएपछि १९७८ मा नाटकीय ढंगले खुल्यो । त्यसैले ‘साइनोलोजिस्ट’ हरू भन्छन्– चीन बुझ्न सय–सय वर्षको विश्लेषण चाहिन्छ, दुई–चार वर्षको उतारचढाव होइन । र, यस्ता ठूल्ठूला निर्णयको प्रकृति राज्यसत्ताको चरित्रसँग गाँसिन्छ । चीन र युरोपको राजकीय शक्तिका पृथक् पृष्ठभूमिलाई कसरी बुझ्ने भन्नेबारे मैले यस पुस्तकबाट निकालेका केही निस्कर्ष छन्—
पहिलो– प्रतिस्पर्धात्मक वैधता । युरोपमा स–साना टुक्रे राज्य थिए । विचारक वा मन्थन गर्न सक्ने कला भएका, आविष्कार गर्ने जो कोही प्रतिभाशाली मान्छेलाई त्यहाँको शासकले दुःख दिँदा एक राज्यबाट अर्कोमा भागेर जाने ठाउँ थियो । यदि कसैले लन्डनमा कुनै सास्ती भोग्यो, उसलाई जेनेभा जान सजिलो भयो । पेरिसमा कुनै सास्ती भयो, भेनिस भागे भयो । चीनले भने इसापूर्व २२१ देखिकै एकीकृत राज्य मात्र होइन, आफूलाई बह्माण्डकै केन्द्रविन्दु मान्थ्यो । प्रताडित चिनियाँहरू भागेर जाने कहाँ ? प्रतिस्पर्धात्मक सहरी राज्यहरूको सञ्जालले कला, विज्ञानको प्रवर्द्धनमा सघायो । चीनले स्थायित्व रोज्यो, समाज गतिशील भएन । अर्को विषय, युरोपका नदीहरूमा धेरै बन्दरगाह छन् । आउने–जाने विकल्प धेरै छन् । चीनका ठूला नदी एउटै भूभागमा कैद थिए । खासगरी व्यापारमार्फत वस्तु र विचारको आदानप्रदानमा भूगोल र नदीहरूको भूमिका ठूलो हुन्थ्यो ।
दोस्रो– सहरहरूको उदय । युरोपमा सार्वभौम राज्यको उदयअघि सहरहरूको उदय भएको हो । युरोपको उत्थान सहरले गराएको हो । १३ औं देखि १५ औं शताब्तीका सहरको इतिहास हेर्नुस् त– फ्लोरेन्स, रोम, भेनिस, मिलान, नेपल्स ! पछि एटलान्टिक ट्रेड सुरु भएसँगै बेलायत, हल्यान्ड, फ्रान्सका सहर चम्किन थाले । सहर र गाउँको आफ्नै कार्यविभाजन थियो । सामन्तहरू गाउँमा बस्थे । सहरहरूले स्वायत्तताको अभ्यास गरे । र, आफ्नै ट्रेड एसोसिएसन बनाउने, श्रमलाई सीपयुक्त बनाउने काम गरे । शासकहरू उबेला कम हस्तक्षेप गर्थे । फोर्टिफिकेसन (किल्ला) भएका सहरमा आफ्नै कानुनी–राज, व्यावसायिक नियम, मौलिक लेखाप्रणाली, क्रेडिट र श्रम बजार स्थापित हुँदै गएर आधुनिक पुँजीवादको जग बसेको हो । बेलायतको बैंक अफ इङ्ल्यान्ड सन् १६९४ मा स्थापना भएको छ । विशाल भारतलाई उपनिवेश बनाएर निलेको इस्ट इन्डिया कम्पनी सेयरहोल्डर भएको सानो निजी कम्पनी थियो, जसको लन्डनमा जम्मा पाँचवटा झ्याल भएको सानो अफिस थियो सुरुमा ।
तेस्रो– वैज्ञानिक विधि र संस्थाहरू । युरोपमा अनुसन्धानको सामान्यीकरण हुन थालेको १६ औं–१७ औं शताब्दीदेखि हो । अवलोकन गर्ने, त्यसलाई सूक्ष्म ढंगले व्याख्या गर्ने र दस्ताबेजीकरण गर्ने प्रवृत्ति किन क्रान्तिकारी भयो ? किनकि ज्ञान–विज्ञान अघि बढ्न ‘रेप्लिकेसन’ र ‘भेरिफिकेसन’ चाहिन्छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा आइज्याक न्युटनले यो यो देखें भनेर टिपे । त्यही कुरा अन्य वैज्ञानिकले पुष्टि गरे । वस्तुनिष्ठ भएर, एकआपसमा जोडेर व्याख्या गर्ने चलन त्यहीँबाट सुरु भएको हो । एक–एक इँटा थपेजस्तो गरेरै आविष्कारको दायरा बढ्दै जाने हो । त्यसलाई प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कारले थप फैलायो ।
टेलिस्कोप, पेन्डुलम, भर्नियर स्केल, क्याल्कुलसको आविष्कार भएपछि विज्ञान थप परिष्कृत हुँदै गयो । यसरी वैज्ञानिक अनुसन्धानको सामान्यीकरणबाटै उच्च विज्ञान र प्रविधिको लहर आएको हो । न्यूनटले सन् १६८७ मा भौतिकशास्त्रमा फड्को मारे, त्यो सबै पहिले छरिएर रहेका आविष्कारको जगमा गरिएको थियो । वैज्ञानिक कुरालाई संगठित गर्न बेलायतको रोयल सोसाइटी सन् १६६० मा गठन भएको हो, जसले ज्ञानको संग्रह गर्ने, सभा–सम्मेलन गर्ने, विचार आदानप्रदान गर्ने, जर्नल निकाल्ने काम गर्न थाल्यो । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन पहिलो पटक सन् १४७३ मा आएको छ युरोपमा ।
औद्योगिक क्रान्ति नबुझी संसारको त्यो कायाकल्प बुझ्न नसकिएला ! औद्योगिक क्रान्तिको विषयमा ‘द वेल्थ एन्ड पभर्टी अफ नेसन्स’ ले केही प्रस्ट पारेको छ ?
औद्योगिक क्रान्तिले सन् १७५० पछि गति समाते पनि हामी वास्तविक ‘टेक–अफ’ को मिति सन् १८२० लाई मान्छौं– ठ्याक्कै २०० वर्षअघि । हाम्रा पुर्खाका कैयौं पुस्तासम्म जीवनस्तर उस्तै थियो । तर, सन् १८२० पछि ३०–४० वर्षमै कायापलट हुन थाल्यो निरन्तर आर्थिक वृद्धिको चमत्कारले । कसरी ? मान्छेको श्रमलाई जनावरको श्रमले प्रतिस्थापन गर्‍यो र औद्योगिक क्रान्तिमा मेसिन आए । उदाहरणका लागि बाफको शक्ति । सन् १६९८ मा तापको शक्तिबारे जानकारी भयो, १७६८ मा वाट स्टिम इन्जिन नै बनाइयो, १५ वर्षपछि घुम्ने गरी बनाइयो ।
यसले जहाजहरू चलाउने शक्ति निर्माण गर्‍यो । गैरमानवीय मेसिन प्रयोगमा आएपछि मेटल, टेक्सटायल, हाइड्रोलिक प्रेस, वाटर टर्बाइन, सिउने मेसिन र ग्यास लाइट आविष्कार गरियो । यसले एकै पटक ठूलो परिमाणमा औद्योगिक उत्पादनको सुरुआत भएको हो । यसपछि बजारमा चुस्त र प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन आउन थाले । मेसिनका आधारमा कलकारखानामा आधारित उत्पादन हुन थालेपछि कृषिबाट उद्योग अनि गाउँबाट मान्छे सहरतिर लागे । एउटा आविष्कारले अर्को आविष्कारलाई परिपूरकका रूपमा काम गरेको हो । आज हामी चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा छौं— पहिलो, ‘बाफ र रेल’ दोस्रो, ‘बिजुली र फेक्ट्री मोडल’, तेस्रो, ‘कम्प्युटर मेनफ्रेम र सेमिकन्डक्टर’ र चौथो, ‘इन्टरनेटमा आधारित डिजिटल युग’ ।
विकास र आविष्कारका सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा तपाईंले अन्य विकसित देश–महादेश (अमेरिका, जापान) का त कुरै गर्नुभएन नि !
मैले माथि गरेको चित्रण विशुद्ध युरोपेली हो । त्यो समय अमेरिकामा आप्रवास बल्ल सुरु भएको थियो, ऊ विश्वमञ्चमा जबर्जस्त आएको १९ औं शताब्दीपछि मात्रै हो । अमेरिकामा गृहयुद्ध सकिनु र जापानमा ‘मेजी रेस्टोरेसन’ एकैताका भएका हुन्– १८६० को दशकमा । १५–१८ औं शताब्दीमा युरोप, चीन र भारत नै सापेक्षिक रूपमा पृथ्वीका समृद्ध ठाउँ थिए । पृथ्वी कोल्टो परेकोले पूर्व–पश्चिम सहकार्यको भूमिका पनि यसमा छ । २० औं शताब्दीमा आएर अर्थशास्त्री साइमन कुज्नेट्सले ठट्टाको शैलीमा भनेका छन् - ‘विश्वमा ४ प्रकृतिका देश छन्– विकसित, अविकसित, जापान र अर्जेन्टिना ।’
जापान र अर्जेन्टिना किन छुट्टै हुन् त ?
जापान सुरुमा दादागिरीको दबदबा भएको मुलुक थियो– सोगनेट । सन् १८६८ मा आएर मात्र उसले छलाङ मारेको हो । जापानले चीनको अधोगति पनि हेरिरहेको थियो । जापानका सम्राट् मेइजीले पूर्वीय सभ्यता जोगाई पश्चिमी विज्ञान र प्रगतिबाट सिक्नुपर्छ भनेर आधुनिकीकरणको यात्रा तय गरे । मेइजीले राजदूत इवाकुरालाई तीन वर्षका लागि युरोप र अमेरिका पठाए, त्यताका ‘प्रगति बुझेर आऊ’ भनेर । त्यस टोलीले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, बेल्जियम, हल्यान्डसमेत घुमेर फर्किएपछि १८७८ मा पाँच भोल्युमको रिपोर्ट दिएको छ । फ्रान्सको प्रशासकीय र न्यायिक प्रणाली, जर्मनीको सैन्य संरचना, अमेरिकाको प्राथमिक विद्यालय, बेलायतको नौसेना, हुलाक र टेलिग्राफ, बेलायतको राष्ट्रिय बैंक भव्य रहेछ भन्ने रिपोर्ट टोलीले बुझायो । बेलायतको संसदीय व्यवस्था जापानले सन् १८९० मै अनुकरण गर्‍यो । १८९५ मा जापानले रुसमाथि युद्धमा विजय हासिल गर्‍यो । अमेरिकासँग भएको असमान सन्धि खारेज गर्‍यो । त्यसपछि जापान ‘साँढे’ भएर निस्कियो । ५० वर्षजति अत्याचारी अराजक बन्यो ।
जापान ‘शान्तिप्रिय’ बनेको त नागासाकी र हिरोसिमामा अणु बम खसेपछि मात्रै हो । सार के हो भने एउटा कालखण्डमा बृहत् भिजन भएको नेतृत्व नै आउनुपर्दो रहेछ । दुनियाँबाट सिक्नुपर्छ, जे सिकिन्छ त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्व चाहिन्छ । एकदम तल रहेको अर्जेन्टिनाको कथा पनि रोचक छ । एक सय वर्षअघिसम्म क्यालिफोर्निया र अर्जेन्टिना कहाँ जान्छौ भनेर युरोपेलीलाई सोध्यो भने उनीहरू ‘उस्तै त हो नि सम्भावना, जता गए पनि हुन्छ’ भन्थे रे ! तर, अहिले क्यालिफोर्निया कहाँ माथि पुग्यो, अर्जेन्टिना कति तल छ ! १९ औं बाट २० औं शताब्दीमा आउँदै गर्दा नेतृत्वको कमजोरी, गलत नीतिगत रोजाइ आदिका कारण अर्जेन्टिनाले बाटो बिराएको थियो ।
माथि चर्चा भएकाबाहेक हाल नयाँ किताब के–के पढ्दै हुनुहुन्छ ?
किनेर पढ्न सुरु गरेको, तर सकि नसकेका केही थान पुस्तक छन् । जसेफ हेनरिकको ‘विर्डएस्ट पिपल इन द वर्ल्ड’, भक्लाव स्मिलको ‘ग्रोथ’, एड डगलसको ‘हिमालय’, लिन्डा कोलीको ‘द गन, द सिप एन्ड द पेन’, क्लाउस मुल्हानको ‘मेकिङ चाइना मडर्न’, हेर्मिओन लीको ‘टम स्टोपार्डः ए लाइफ’ । अहिले देवेन्द्रराज पाण्डेको ‘एक ज्यान दुई जुनी’ पनि पढ्दै छु । र, केही दिनअघि वासिङ्टनमा रहेका असाध्यै धेरै किताब पढ्ने मेरा मित्र नीरज श्रेष्ठले नेपाली मूलका दार्जिलिङका कवि रोहण क्षत्रीबारे जानकारी दिए । रोहण विश्वस्तरकै बेजोड नयाँ प्रतिभा रहेछन् ।
अनि अहिलेको महामारी बुझ्न कस्ता किताब पढिरहनुभएको छ नि ?
विश्वका प्रतिष्ठित अखबारले महामारीका विविध पाटामाथि निरन्तर ‘कभरेज’ गरिरहेका छन् । सन् २०२० मा ‘द एटलान्टिक’ मा एड योङले गरेको वैज्ञानिक रिर्पोटिङको शृंखला उत्कृष्ट थियो, उनले पुलिट्जर पुरस्कार पनि पाए यही साल । हालै रायन बोर्नको किताब पढेँ– ‘इकनमिक्स इन वान भाइरस’ । किताबले कोभिड–१९ को आँखीझ्यालबाट अर्थशास्त्र कसरी सिक्ने भनेर रोचक ढंगले बुझाउँछ । अब महामारीपछिको नयाँ विकास–पथ वा प्राथमिकताबारे मेरै सह–सम्पादनमा १३ वटा अध्यायको पुस्तक यसै वर्ष छापिँदै छ, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेसबाट ।
तपाईं केका लागि पढ्नुहुन्छ ? ज्ञान र आनन्द लिन कि बाध्यताले ?
पहिलो त ज्ञानको दायरा बढाउनकै लागि पढ्ने हो । व्यक्तिगत वृत्ति विकासका लागि पनि पढाइ अपरिहार्य छ । तर, त्यसमा आनन्द अन्तर्निहित हुनुपर्छ । आनन्द वा उत्साहले आत्मविश्वास भर्छ । २५ वर्षअघि यी दुई किताब पढ्दा ‘ए गाँठे, पृथ्वी कोल्टो भएर यस्तो भएको पो रहेछु’ भन्ने दाबीले अहिलेसम्म तरंगित बनाउने र चिरस्थायी प्रेरणा दिने काम गर्छ मलाई । नयाँ ज्ञानले दिने ऊर्जा स्वर्गीय छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कामको सिलसिलामा सोच्ने तरिका फरक पारिदिन्छ । यस्तै पुस्तकको अध्ययनले मलाई एउटा प्राविधिक अर्थशास्त्रीको साँघुरो फ्रेमबाट बाहिर ल्याएको हो भन्ने लाग्छ ।
मन परेका किताबलाई के गर्नुहुन्छ ?
‘न्युयोर्क टाइम्स’, ‘द इकनमिस्ट’, ‘द न्युयोर्कर’ जस्ता राम्रा पत्रिकामा आएका पुस्तक समीक्षा नियमित पढ्छु । र, राम्रा किताब किनेरै राख्ने बानी बसेको छ । पछि काम लाग्ला भनेर किनेका, तर पढ्न नभ्याएका किताब धेरै छन् । सानोतिनो लाइब्रेरी छ घरमा । अहिले इन्टेरनेटले पनि सहयोग गरेको छ । तर, हार्डकपीमै मेरो मोह छ । लामो शोध गरेर लेखिएका र अझ पुरस्कृत किताबमा मेरो ध्यान बढी जान्छ । ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ का प्रतिष्ठित स्तम्भकार मार्टिन वोल्फले केही दिनअघि १५ वटा ताजा किताबको चर्चा गरेका थिए । तिमध्ये चारवटा मैले झिकाइसकें– दुईवटा नवप्रवर्तनबारे, एउटा भाइरसले सिकाएको अर्थशास्त्रबारे र अर्को मिनुस सफिकले लेखेको नयाँ सामाजिक करारबारे ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छापिएका किताबबारे निकै चर्चा गर्नुभयो । एकछिन नेपाली किताबबारे कुरा गरौं !
वर्षौं शोध (अनुसन्धान) गरेर, प्राज्ञिक खालको जगमा लेखिएका किताब मलाई बढी मन पर्छन् । मैले माथि इङ्गित गरेका पुस्तक ५ देखि १५ वर्ष लगाएर लेखिएका हुन् । उदाहरणका लागि रबर्ट कारो नामका एक इतिहासकार छन्, जसले ३६ औं अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जन्सनबारे ५ भल्युमको जीवनी लेखेका छन्, ३० वर्षसम्म शोध गरेर । यसरी पश्चिमा प्राज्ञले लेख्नेजस्तो कालजयी प्राज्ञिक कृति नेपालमा कमै लेखिएका छन् । अपवादमा महेशचन्द्र रेग्मीका पुस्तक पर्छन् । ‘त्यसबखतको नेपाल’ पनि लामो समय लगाएर लेखिएको संस्मरण हो । नत्र हामीकहाँ केही महिनामै टिपन–टापन गरेर एक थान किताब निकाल्ने होड छ । अहिले पुस्तक प्रकाशन गृह पनि धेरै खुलेका छन्, प्रतिस्पर्धा बढेको छ । तर, ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउने खालका पुस्तक उति देख्दिनँ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले त्यस्ता किताब लेख्नुपर्ने हो । हाम्रोमा त्यतातिर संस्कार, क्षमता र उत्प्रेरणाको जग बसिसकेको देखिन्न ।
किताबबिनाको जीवन र पुस्तकालयबिनाको देशको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ?
यो मान्छेको सभ्यतागत अस्तित्वमै गएर जोडिन्छ । किताब नपढ्ने, किताब पढेर नसिक्ने, किताब नलेख्ने वा आफू नपढे पनि किताबको सम्मान नगर्ने मान्छेहरूसँग संगत गर्नै नपरोस् भन्ने लाग्छ ।
पुस्तक र पुस्तकालयका सन्दर्भमा हामी कहाँ, कुन स्थानमा छौँ ?
यी सन्दर्भमा हामी अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छौं । हाम्रो मुलुक राजनीतिप्रधान भयो । पुस्तकालयका बीउ रोपिएका थिए, तर हुर्केनन् । केशर पुस्तकालय त्यो समयमा त्यत्रो भिजन र सामर्थ्यका साथ बन्यो । तर, संवर्द्धन गर्न सकेका छैनौं । मदन पुस्तकालय पनि राम्रो प्रयास हो । राष्ट्रिय पुस्तकालयको पनि बेहाल छ– हरिहर भवनबाट लखेटियो, जमलमा बनाउने भनिए पनि पुस्तकालयको भवनका लागि जग नै खनिएको छैन । पुस्तकालय बनाउनसमेत अनशन बस्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने विन्दुमा छौं हामी ।
विश्वविद्यालयका पुस्तकालयहरू सुरुमा राम्रा हुने, पछि मेन्टेन वा विस्तारित नहुने अवस्था छ । खराब राजनीतिले समाजलाई न्याँक्दा कला, संस्कृति, साहित्य ओझेल परेको छ । तर, सबै विषयमा राज्यमै आश्रित हुनुपर्छ भन्नेचाहिं होइन । बुझेका, स्रोत भएका, विश्व देखेका एलिटहरूले व्यक्तिगत पहलमा पनि यी काम अगाडि बढाउन सक्छन् । अलिअलि त्यस्तो पहल भएको पनि छ । सामुदायिक स्तरमा पनि पहल भएका छन् । आधुनिकीकरणसँगै पुस्तकालय, कन्सर्ट हाउस, नाट्यघर, संग्रहालय र खुला ठाउँ आवश्यक छन् । हामी भौतिक रूपमा त्यो चरणमा पुगिसकेका छैनौं । तर, चेतना भने स्थापित हुनपर्थ्यो । विकास अर्थात् ढुंगा, माटो, गिट्टी, अलकत्रामा अड्किएका छौं हामी । र, हामी अपूर्ण, एकांगी विकासको चित्रमा बढी मुग्ध भयौं ।
तपाईं आफैंले पनि किताब लेख्नेबारे केही सोच्नुभएको छ कि ?
म प्राज्ञ होइन । प्राज्ञ भएको भए ‘पब्लिस अर पेरिस’ को मन्त्रले तर्साउँथ्यो होला, अर्थात् ‘शोध प्रकाशन गर, नभए सिद्धियौ’ । एउटा पेसेवर प्राक्टिसनर मात्र भएकाले त्यता मेरो समय गएको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृहहरूमार्फत लेखिएका किताबभित्र धेरै च्याप्टर धेरै छपाएको छु । पछिल्लो समय मैले ‘जब्स, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द इकोनमिक स्ट्रक्चर’ भन्ने पुस्तक ल्याएँ । छरिएका केही नीतिगत शोधमूलक लेखलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा एकीकृत गरेको छु त्यसमा । यसलाई म आफैं गन्दिनँ, केपी ओलीको कार्यकालमा मैले लेखेका लेखहरूको एकीकृत संग्रह पनि छापिने प्रक्रियामा छ । म त्यसलाई पनि मिहिनेत परेको उल्लेख्य पुस्तक मान्दिनँ ।
तपाईं आफैं पनि सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) लाईएउटा पोलिसी थिंक–ट्यांकका रूपमा विकास गर्दै हुनुहुन्छ । त्यहाँ किताब, पुस्तकालयसम्बन्धी के–कस्ता व्यवस्था छन् ?
४२ वर्षअघि नेपालीहरूले नै स्थापना गरेको इतिहास बोकेको संस्था हो यो । यसलाई बिस्तारै दक्षिण एसियाकै अग्रणी थिंक–ट्यांकहरूको लहरमा उभ्याउने मेरो चाहना छ । आर्थिक–सामाजिक विकास, पर्यावरण, सुशासन र रणनीतिक विषयमा नीतिगत सुझाव दिन सक्ने सामर्थ्य बनाउने प्रयास छ । हामी गहिरो अनुसन्धान गरेर, विज्ञहरूबीच छलफल गराएर निचोड निकाल्ने काम गर्नेछौं । यस संस्थामा म दुई वर्षअघि अध्यक्ष भएको हुँ । त्यसमा एकै पटक तीन कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।
एउटा– यो संस्था भएको ठाउँलाई भौतिक रूपमै आकर्षक बनाउनुछ । सरकारी अनुदान होइन, उल्लेख्य निजी सहयोगबाट हामीले पहिलो चरणको भौतिक संरचना विस्तार सम्पन्न गरेका छौं । दोस्रो– मानव संसाधन । भवन मात्रै भएर हुँदैन, मुख्य प्राण भनेकै योग्य मान्छेहरूको उपलब्धता हो । त्यसैले सचिवालयमा डाइनामिक युवाहरू छान्दै, प्राज्ञिक र अनुभव भएका व्यक्तिलाई फेलोसिपको व्यवस्था गरेर संस्थामा अनौपचारिक रूपमा आबद्ध गराएका छौं । विदेशमा रहेका प्राज्ञिक नेपालीलाई पनि जोड्ने काम भइरहेको छ । तेस्रो– वित्तीय अवस्था र साझेदारी । आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन हामीले अक्षयकोष स्थापना गरेका छौं । योग्य संस्थाहरूसँग दीर्घकालीन साझेदारी पनि सुरु गरेका छौं । अमेरिकाको इन्टरनेसनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट र दक्षिण एसियाका थिंक–ट्यांकहरूसँग सहकार्य सुरु भएको छ ।
यो संस्थाको एउटा गहना पुस्तकालय पनि हो । तर, डिजिटल युगमा हामीले यसको प्रयोग फरक ढंगले गर्ने सोच बनाएका छौं । ठाउँ मात्रै ओगट्ने होइन, छरितो र प्रविधिमैत्री पनि बनाउनुछ । जोकोही गएर पुस्तकालयमा बस्न, पढ्न र निःशुल्क इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने बनाउँछौं । अब जर्नलहरू सबै अनलाइन छन् । तर, ऐतिहासिक एवं कालजयी पुस्तक संग्रहहरूको छुट्टै ‘अर्काइभल’ व्यवस्था गर्ने योजना छ । जस्तै : महेशचन्द्र रेग्मी, यदुनाथ खनाल, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, हर्क गुरुङ, सरदार भीमबहादुर पाँडे आदिका दुर्लभ कृति किनेरै भए पनि पुस्तकालयमा राख्ने सोच छ । निकै पुराना दस्ताबेज ल्याएर हामीलाई बुझाउने क्रम पनि सुरु भएको छ । अस्ति भर्खर अस्ट्रेलियामा कार्यरत अर्थशास्त्री डा. प्रेमजंग थापाले २०३० सालताकाका पुराना रिपोर्ट दिनुभयो । यदुनाथ खनालका अप्रकाशित पाण्डुलिपि डा. जयराज आचार्यले दिँदै हुनुहुन्छ । यसरी डिजिटल लाइब्रेरी र बहुमूल्य ऐतिहासिक संग्रहको द्वैध उद्देश्यबाट हामी निर्देशित हुनेछौं ।
तस्बिरहरू : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर
प्रकाशित : असार २६, २०७८ ११:००
असार २६, २०७८ सुमिना
बाटोमा एकसुरले हिँडिरहेकी तिमी भोलि अचानक छाउन सक्छौ कर्पोरेट मिडियाहरुमा छाउन सक्छौ देशका शीर्ष अखबारका पाना र टेलिभिजनका पर्दाहरुमा बनेर सनसनीपूर्ण खबर
एकाएक भाइरल हुन सक्छ
तिमीले लेखिरहेको ‘स्ट्याटस’
एकाएक चर्चित हुन सक्छ
तिमीले बोलिरहेको सतही वाक्य
लगाइन सक्छन् बाटाघाटाका विद्युतीय पोलहरुमा
तिम्रा ठूलठूला पोस्टरहरु
चारैतिर तिम्रो अनुहार र व्यक्तित्वको
अतिशय बखान हुन सक्छ
आफ्नो अतिशय चर्चाको खुसी मनाउँदै गर्दा
एक पटक अवश्य सन्देह गर्नु
यो कृत्रिम प्रसिद्धि
कतै आफ्नै पतनको कारक पनि त हुन सक्छ
अनि आशंका गर्नु
तिम्रो प्रसिद्धिमा भूमिका खेलिरहने
तिम्रो बखान गर्ने
आफ्नै शुभचिन्तक या प्रशंसकहरुमाथि
माइक्रोफोन बोकेर तिमीलाई पछ्याइरहने
हातहातमा उपलब्ध मोबाइल फोनहरुमाथि
र आशंका गर्नु
तिमीतिर सोझिएका डिजिटल क्यामेराहरुमाथि
प्रोपोगान्डा या बजार ‘मास एटेन्सन’ को सिकार बनाएर
लैजान सक्छ तिमीलाई तिमीभन्दा पर
एक पृथक् दुनियाँमा
जहाा तिमी फुर्सदमा एक पटक
अवश्य झस्किनेछौ आफ्नै आवृत्तिसँग
अलिकति गाजल र गुलाबी लिप्स्टिकको सहारामा
तिम्रो अस्तित्व निमिट्यान्न पारी
तिमीलाई कैद गर्न सक्छ
मानवताभाव, संवेदना र चेतना निचोरेर
आधुनिक युवतीजस्तै देखिने एउटा निर्जीव स्केचमा
जोसाग मानवीय आकृति त छ
तर, कतै दबिएको छ मानवीय संवेदना
जो हरबखत बजारको तालमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छे
कहिले विज्ञापनको साधन बनेर
त कहिले नर्तकी बनेर
कतै यौनकर्मी बनेर
त कतै सेवा प्रदायक वस्तु बनेर
यतिबेला युगको आँगनमा
मडारिइरहेको छ पुँजीवाद
जो तिम्रो अस्तित्वका निम्ति सबैभन्दा घातक छ
युगको आँगनमा मडारिइरहेको पुँजीवादको साङ्लो
थाहै नपाई बेरिन सक्छ तिम्रो गर्धनमा
जो अति उदारताको ‘स्याम्पल’ देखाएर
सिद्ध हुन सक्छ तिमीमाथि अनुदार
दूर क्षितिजतर्फ लक्षित गर्दै
स्वतन्त्र उडानको सपना देखाएर
काटिदिन सक्छ सधैंका लागि
तिम्रो हौसलाको पंख
र कैद गरिदिन सक्छ स्वर्ण पिँजडाभित्र
एउटा रंगीन दुनियााको
सुसज्जित सुन्दर र रंगीन पन्छी बनाएर...!!
प्रकाशित : असार २६, २०७८ ११:०५